Cake Chocolate Strawberry Imperial - Resety Thermomix | ThermoRecipes
Tart Chocolate Chocolate Strawberry
tsindrin-tsakafo65 minitraOlona 8290 kaloria
Ilaina io mofomamy io noho ny endriny, ny tsirony ary ny lokony. Izy io dia tsindrin-tsakafo vita amin'ny boaloboka vita amin'ny fomba mahazatra ahafahanao manamboatra mora foana amin'ny Thermomix anao sy amin'ny dingana vitsivitsy vitsivitsy.
Jereo ny firafiny satria manana mofomamy spaonjy spaonjy sy be ranony izy, noho ny ranon-dranony mamy sy ron-kena. Ny famenoana azy dia manana endrika tsotra vita amin'ny crème flavour vanilla izay hataonay ao anatin'ny roa minitra.
Ny haingon-trano dia tena tsotra, mila mizara ny mofomamy fotsiny ianao, mameno sy manarona crème betsaka. Avy eo dia handravaka frezy kely maro isika izay hanome izany loko sy tsiro mahafinaritra izany. Mba hamenoana banga sasany dia nampiana ravina mintara. Mandrosoa ary andramo!
1 Tart Chocolate Chocolate Strawberry
Ity mofomamy ity dia faran'izay matanjaka noho ny volony mamy sy mamomamo. Hanao crève karavasy matsiro miaraka amin'ny lavanila koa izahay ary handravaka ity tsindrin-tsakafo matsiro ity miaraka amin'ny frezy kely sy salama.
80 g ny lafarinina varimbazaha
Vovoka kakaô 4 sotro fihinanana XNUMX sotro fihinanana
40 ml rano
Ronono 30 ml
Stuffing sy haingon-trano
Krim-kapoka mangatsiaka 700 ml
Fitrandrahana lavanila 2 sotrokely
Frezy kely 200 g
Manomboka amin'ny fanaovana ny mofomamy aloha isika. Ao amin'ny verantsika Thermomix dia hametraka ny lolo isika ary hanampy ny atody efatra sy ny siramamy 100 g. Hafangaroinay amin'ny alàlan'ny programa izany 6 minitra amin'ny 37 ° amin'ny hafainganana 3,5.
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180 ° izahay. Avy eo miverina amin'ny programa indray isika 6 minitra (tsy misy mari-pana) amin'ny hafainganam-pandeha 3,5. Raha vantany vao vita ny fangaro, ampio ny lafarinina varimbazaha 80 g, ny vovo-tsakafo eran'ny sotrokely, ny vovon-tsakafo kakaô efatra sotro fihinana ary ny ranom-boankazo roa sotrokely. Izahay dia manao fandaharana 5 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Manomana lapoaly mofomamy misy savaivo 18cm eo ho eo izahay ary azo esorina amin'ny lasitra. Raha ny amiko dia nampiasa lasitra silika aho ary nametraka taratasy fanendasana amam-paosy teo amin'ny fotony, ka rehefa vita ilay mofomamy dia azo esorina mora foana izy io. Izahay dia manampy ny fangaro ary mametraka azy ao anaty lafaoro eo anelanelan'ny 20 sy 25 minitra.
Manomana ny syrup izahay. Ao anaty lovia kely dia ampio ny rano 40 ml, ny ronono 30 ml ary ny siramamy roa sotro. Afangaroinay tsara amin'ny sotro iray ary apetraka.
Ao amin'ny verantsika Thermomix madio no ametrahantsika ny lolo hanamboarana ny crème whipped. Ampiana ny crème whipping cold 700 ml, ny siramamy 175 gr ary ny sotro vanila roa sotrokely. Hanomana izany isika 1 minitra amin'ny hafainganana 3,5. Mety mila fotoana bebe kokoa ianao, fa ny mikapoka ny crème dia manondro izany. Raha mila segondra misimisy kokoa ianao amin'ny fampifangaroana dia ilaina ny mandrindra izany mandra-poka azy, tsy mihoa-pefy.
Amin'ny mofomamy efa vita sy mangatsiaka, dia hivondronantsika ny mofomamy. Nozarainay roa ny mofomamy ary ampio ny syrup nozaraina tsara tamin'ny sosona voalohany an'ny mofomamy. Manampia crème malala-tanana eo amboniny ary sarony ny antsasaky ny mofomamy spaonjy.
Manarona ny mofomamy indray izahay miaraka amin'ny crème, mandatsaka sosona tsara ary manao karazana tendrombohitra. Apetratsika eo amboniny miaraka amin'ireo rambony ireo frezy, apetraka tsara ary atsimpona. Handravaka ny zorony sasany amin'ny ravina mint.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Tart Chocolate Chocolate Strawberry
Karaoty vita amin'ny karaoty miaraka amin'ny voatabia maina amin'ny menaka